IINGCINGA EZIPHEZULU EZINGAMA-47 ZEBADASS EZINCINCI ZETATTOO YAMADODA [ISIKHOKELO SIKA-2021 SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcinga eziPhezulu ezingama-47 zeBadass ezincinci zeTattoo yaMadoda [Isikhokelo sika-2021 sokuphefumlela]
Ezi tattoos ezinesibindi esimangalisayo kunye ne-badass zigcina emajukujukwini, kodwa azincami akukho mgangatho kubungakanani obuncinci.
Uya kufuna kwangoko ukuya kwivenkile ye tattoo ekufuphi emva kokudityaniswa kwezi tatto ezincinci ze-badass.
Iitatto ezincinci zihamba kuba zingenawo amandla amangalisayo okudlulisa iintsingiselo ezingakholelekiyo, kodwa zikwalula kwaye kuyilo olucocekileyo.
Inkqubo ye- imigca engqindilili kodwa echanekileyo ncoma ngokugqibeleleyo ukuzithemba kwendoda kunye nesitayile. Ezi zincinci Iitattoos ezincinci zizongezo ezimangalisayo ecaleni kwemisebenzi yangaphambili okanye njengezichuliweyo, iziqwenga ezizimeleyo zobugcisa bomzimba.
Jonga le galari yeetassos ezincinci iitatoos, ngekhe ukwazi ukulawula umnqweno wohambo oluya kufutshane nevenkile yomgangatho ophezulu we tattoo.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango ezi-5 eziphezulu zeTattoo ezincinci
1. Faka imibala yeTatio encinci
Ezi tatto zimbini zahlukileyo zengalo zibonisa indlela a uyilo olukhulu lwejiyometri yenza umsebenzi omnandi. Ngelixa kwahluke kakhulu ukujonga, zombini zisebenzisa umbala omtsha wamaza ngobuchule beepateni zejiyometri ukutsala iitattoos ezimbini ezithandekayo.
Kuya kuba lunomdla ukwazi ukuba le tattoo yamantshontsho yenziwa ngaphambi, okanye emva, isiqalekiso sabo se-World Series saphakanyiswa, nangona kungakhathali. Ibhola ye-baseball iyaziwa kakuhle, ijongeka ngathi iyabethwa kwaye ityumkile ngenxa yokufumana indawo. I-logo nayo yenziwe kakuhle kwaye ibonakalisa ubunyani bokwenyani.
Esi siqwenga siyimbongolo embi, njengenkosi endala yaseFrance eyaphoswa ukuba ihlale emzimbeni womntu obhala umvambo kangangeeyure ezimbini okanye ezintathu. Ndiyakuthanda ukusetyenziswa kwesangqa ukwenza umda osisiseko somfanekiso ogqitywe ngokupheleleyo ngaphakathi. Ngumsebenzi omkhulu lowo.
I tattoo yomthi wosapho ngasemva
Wowu. Le Warhol encinci iphefumlele umvambo omtsha we tattoo ayikholwanga. Bekuya kuthabatha ixesha elininzi ukuyenza kunesiqwengana esiphindwe kalishumi kubungakanani. Kukho inani elingenasiphako lobuchwephesha kwimisebenzi yamachaphaza- ukusuka kumbala odityanisiweyo ukuya kuthi ga kumbala we-grayscale-kwaye ukuba mncinci kakhulu bekukho umda omncinci wempazamo. Uya kuba nzima ukuba ufumane into enzima ngakumbi, okanye eqaqambileyo, yokwenza umvambonaphi na.
2. Iingcamango zamaKristu ezincinci zeTattoos
Olunye ukholo lobuKristu, umvambo weliso ngaphakathi koonxantathu umela ukujonga kukaThixo nangona ifestile yobathathu emnye- utata, unyana nomoya oyingcwele -ukujonga indlela abantu abaziphatha ngayo. Sebenzisa ukufota okungwevu kwinaliti ebanzi yegeji kunika umfanekiso umfanekiso wobunjani obunikezelwe ngenjongo egxininiswe yimithi ephuma elisweni.
Esi siqwenga simele ubuchule obuchanekileyo besitayile se-3D ukubonisa umnqamlezo kaChristain. Iinkcukacha ze-gilt emnqamlezweni zidityaniswe nomsebenzi wokufiphaza kwityathanga inki emhlophe -Ujika umfanekiso olula ube sisiqwenga sezinto zonqulo.
Oku tattoo yonqulo Utsalwe kakuhle kakhulu, usebenzisa uhlobo lwefonti ebukhali ukuze abukeke umvambo. Sebenzisa umbala obomvu ukongeza kugxininiso kuKristu kukuchukumisa okuhle.
3. Ubugcisa obuncinci obuMnyama kunye neGrey Tattoo
ube ngamanzi umhlobo wam umvambo
RIP Cookie. Le tattoo ikhumbula isilwanyana ilungile. Iskripthi esibalekayo sisebenza kakuhle ngokumila kwepawuthi, ngelixa ukufiphaza okungwevu kuzalisa umfanekiso kwaye kuwenza ungacacanga.
Ukuya kuthi ga kwii-tatoo ezincinci zamadoda eziya kulo Thixo wamaGrike unokuhombisa phezulu kweAthenic Pavilion kwenye indawo. Iindevu kunye neenwele zifakwe umthungo ngobunono, zinika iqhekeza ukujonga ngokufanayo kule mifanekiso iqingqiweyo uyifumana iqingqiweyo kwimarble okanye ialabhasta.
Iidayisi ngumthombo odumileyo wokukhuthaza iitattoos ezincinci emadodeni, zihlala zibonisa ithamsanqa okanye ukuthatha izigqibo zomngcipheko. Umbala ongwevu ongaphandle kwetyhubhu unika obu bunye ubunzulu.
Cocktails nabani na? Oku kumnandi I tattoo ngumdwebi otyhidiweyo otyhidiweyo oboniswe ubunyani isitayile. Ukufiphaza isiciko sokugungqa sikumgangatho ophezulu, siboleka isinyithi esikhanyayo kumfanekiso.
Hahaha. Le yincinci encinci umvambo wepitsa . Ukufiphaza ngokulula apha kusebenza kakuhle ukwenza iinkcukacha zento encinci.
4. Iingcamango ezincinci zeTattoo kubantu abasebenzisa i-Ink emnyama
Oku kuncinci umvambo wesandla ukusebenzisa iileta zokuhombisa kuyinto entle kwaye icocekile. Ibiya kuba ngumsebenzi okhawulezayo, ongenabuhlungu usebenzisa inaliti enye.
Le tattoo ye-anchor inaliti enye yesitayile esidala itotto emnyama emnyama. Ayisiyonto yakwenza imbeko nentloko ukunqwala kuyo Imixholo yobugcisa bemvambo ukusukela ekuqaleni kwama-20thkwinkulungwane.
Le tattoo encinci yesifuba / yegxalaba sisiqwenga esibhaliweyo esenziwe kakuhle. Imigca eyahlukileyo eyahlukileyo yonke izotywe kakuhle kunye nothotho ngokudibeneyo, ukunika isiqwenga iinkcukacha ezithe kratya kunye nomgangatho ofana nesitampu.
5. Uyilo lweTattoo eNcinci
Umnqamlezo we tattoo engalweni
Ukuba undwendwele i-Golden Pavillion yaseKyoto kwaye wayithanda, ukubona inguqulelo emnyama emnyama kuyaphola. Ijongeka njengelitye lesikhumbuzo laseJapan, nditsho nasezantsi kweethingi ezinqunqiweyo kunye nechibi eligcwalisiweyo.
Le ndlwana ehlathini imnandi. Sebenzisa iimilo ezahlukeneyo kunye nee-shades ngokwenene kunika lo msebenzi wobugcisa uvakalelwe ngokwendalo. Kuyamangalisa ukuba wenziwe kumvambo omncinci omncinci- kwaye kunzima ukukholelwa ukuba ichaphaza lesibhakabhaka yayiyeyona nxalenye inamandla ye tattoo eyenziweyo. Ingca ene-inki enomdla ikwadala i-'brastroke 'engaqhelekanga, yongeza omnye umaleko womdla kwesi siqwenga.
6. Iingcamango ezincinci zeTattoo
UHokusai wayengumculi waseJapan wobugcisa obukhulu kunye nokucaca. Lakhe I-wave yenye yezona ziqwenga zaziwayo eJapan ubugcisa, kwaye ihlala iphindwaphindwa ngoochwephesha abanomdla kwinkcubeko yaseJapan. Okumnyama nokungwevu kwesi siqwenga kukumelwa okuqinileyo, kunye neencopho zentsimbi ezimhlophe ezenziwe ngombala omhlophe ezenziwa ngokukodwa.
Imibono yegadi yeentyatyambo ephakanyisiweyo
Le tattoo encinci ye-badass yindawo entle yaselunxwemeni, ifaka ifoto ongayithatha uhamba unxweme lolwandle eWaikiki. Sebenzisa ubunzulu bobuchwephesha apha kudala ukubonwa okukuko kwekhadi leposi kumfanekiso.
7. AmaTattoos amancinci aphakathi
Sisithathu samakrele amabi? Ndibhalisele idabi. Oku kuyinto enkulu, eyintsusa ithatha isitayile se-flash sobugcisa. Isebenzisa umthunzi ongenasiphako ukwenza i-tatt epholileyo. Elona candelo libalaseleyo kukunikezela ngesakhono kwibala elingasemva, ukongeza ubunzulu kuwo wonke umfanekiso kunye nokugqiba umbono.
Esi sithsaba sizukileyo. I-fleur-de-lis yesithsaba yenziwa ngobuchule obukhulu. Ukwenza umthunzi apha kubalulekile ukunika iinkcukacha ezibalulekileyo kunye nobunzulu kwisiqwenga, ngelixa oonobumba besenziwa ngokulula, kodwa ngononophelo olukhulu.
Kulungile, ke le yile tattoo encinci engaqhelekanga kuba akukho shading yokwenza iziphumo zesigcina-ntloko sensimbi. Yenziwe ngomsebenzi omnyama osebenzayo, ngelixa izembe lisebenzisa i-dotwork enzima ukubeka iinkcukacha kwi-haft nakwintloko. Sebenzisa emnyama eqinileyo, ebukhali kwiindawo, ezinjengegazi, kunye ne-buckle, ikwayindlela enobuchule
8. Iinkcukacha eziLungileyo zeeNgcaciso zeTattoo ezincinci
Le tattoo encinci ye-calligraphy ipholile. Umsebenzi womgca wendlela ye-ink uyindawo, ngelixa intloko yepeni ibhalwe ngobuchule be-deft.
Olu hlobo lwincinci lwe tattoo lubhalwe kwi-forearm yimbongolo embi. Zonke izinto zomsebenzi zinxulunyaniswa ne-shading-spot, kwaye ukusetyenziswa kwebhodi encinci kunika esi siqwenga isikolo esidala kakhulu. Qaphela indlela igcisa elisebenzisa ngayo umsebenzi omnyama obukhali kwiitraki zeevili ukuyinika phantse umgangatho wokufota.
Esi sisigcawu esinye esibi esingasokuze sithathe ububele ekunyathelweni. Ubunyani besigcawu uqobo buye bushukuxwe ngumsebenzi wesithunzi esimnandi kunye nokakayi kubhalwe umvambo emqolo. Ukusetyenziswa kwamachaphaza okwenza umthunzi kwesi siqwenga kungaliphinda kabini ixesha elithathiweyo ukuyinki kwaye kunika isigcawu amandla.
nothixo zonke izinto zinokwenzeka tattoo
Ii-FAQs ezincinci zeTattoo
Yimalini itattoo encinci?
Ixabiso elincinci le tattoo Unokuqala ukusuka kwivenkile ubuncinci be- $ 50- $ 80 yoyilo oluncinci- i-intshi ezimbini zesikwere okanye ngaphantsi, ukuya kuthi ga kwi-200 yeedola ngeyure yomsebenzi onzima ngakumbi.
Abanezakhono eziphezulu, kwimfuno yamagcisa anokuhlawulisa ukuya kuthi ga kwi-500 yeedola ngeyure, ngelixa abafundi abafundela umsebenzi kunye nabaculi abanamakhono amancinci bengaphantsi kwe- $ 75.00 ngeyure.
Iitattoos ezincinci ezibekwe kwiindawo ezinzima njengezandla neenyawo zinokuyalela ixabiso elibiza kakhulu. Ngala maqhekeza kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba unokuqonda okucacileyo nokuba ngaba nawuphina umsebenzi wokuchukumisa uyagutyungelwa kwindleko yoqobo
Ithetha ntoni itattoo enonxantathu?
Oonxantathu abathathu I tattoo ihlala isetyenziselwa ukumela umKristu UBathathu Emnye kaYise (uThixo), uNyana (uYesu), noMoya oyiNgcwele. Kudla ngokwenziwa kuthotho loonxantathu abalinganayo abalinganayo.
Umvambo ononxantathu oqhagamsheleneyo ubizwa ngokuba yiValknut. Igama laqanjwa ngamagama ama-Old Norse valr, athetha ukuba 'amajoni abuleweyo', kunye neqhina, elithetha 'iqhina'. Eyona ntsingiselo isemva kophawu ayaziwa kodwa inezinto ezininzi ezichaziweyo ezifunwa ngabaphengululi baseNorse Mythology.
Ubeka phi itattoo encinci?
IiTattoo ezincinci zezona zinto zibhetyebhetye- zinokuya ngokoqobo naphina apho unendawo yokubeka i-inki. Nangona kunjalo, ukuba usaqala kuhambo lwakho lwe tattoo kodwa uzimisele ukufumana iziqwenga ezinkulu kakhulu, ke kungcono ukuba uphephe amabala aphambili anjengomqolo, amagxa, amathanga, nesifuba.
Ezi zihlala zihlala amabala apho kubekwa khona inki enkulu kunye nobunzima. Ngelixa ii-tattoos ezizodwa zinokufakwa kwenye imifanekiso, ukuba noyilo olunye kukhethwa kwizifundo ezininzi.
ngaphambi nasemva kweendevu
loluphi uhlobo lokuthambisa oza kulisebenzisa kwiitattoos
g mkhulu kune-highs and tattoo low
iinwele ezimnyama zamadoda ezinwele (2020)
I-tv eludongeni umbono